Kromberk Castle, Grad Kromberk - Nova Gorica
ဥရောပ ဆလိုဗေးနီး Nova Gorica
နေရပ်လိပ်စာ: Grajska cesta 1, 5000 Nova Gorica, ဆလိုဗေးနီး;
ဖုန်းနံပါတ်: +386 5335 98 11;
hours: မွန်, Tues. - Wed, Thu, Fri, Sat ပိတ်ထား .... - 12-15, 19-22, ယာ - 12-17 ။
ပုံမှန်အားဖြင့်သော့ခတ်သည့်တပိုင်တနိုင်အရပျ၌တညျဆောကျနေတဲ့ကျုံးနှင့်အတူရံနှငျ့ပိအစွမ်းထက်အဆောက်အဦးတစ်ခုနံပါတ်, နားလည်ပါသည်။ Kromebrk Castle ( ဆလိုဗေးနီး ) ဤကိစ်စတှငျမူထူးခြားတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာစပျစ်ဥယျာဉ်များတို့တွင်အ Nova Gorica နီးစပ်သည်နှင့်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး Goritsky ပြတိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဤကိစ္စတွင်အဆောက်အဦး 116 မီတာအမြင့်မှာစိုက်ထူ။
စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ရဲတိုက် Kromberk ကဘာလဲ?
အဆိုပါ XVII ရာစုအတွင်းတည်ဆောက် Kromberk ရဲတိုက်ရဲတိုက်၏ထောင့်တွင်တည်ရှိပြီးသောစတုရန်းအဆောက်အဦးဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါသုံးထပ်အဆောက်အဦတစ်ခု Renaissance စတိုင်အလှဆင်ထားသည်နှင့်ပန်းခြံများကဝိုင်းရံထားသည်။ ရဲတိုက်လိုဗေးနီးအများစုဆင်တူအဆောက်အဦများအနေဖြင့်ကွဲပြားခြားနားသည်ဟူသောအချက်ကိုနေသော်လည်း, ကအထင်ကြီးလှပါတယ်။
အချိန်နှင့်စစ်ပွဲများအတွက်အဆောက်အဦးများအပြင်ပန်းအပေါ်ထားတဲ့ Imprint ကျန်ကြွင်းစေပြီ။ ရဲတိုက်၏ဒေသအများအပြားပျက်စီးသွားခဲ့သည်နှင့်ပြောင်းပြန်မရနိုင်ပါ။ သို့သော်ခရီးသွားဧည့်သည်ရဲတိုက်ခရိုင်၏မွို့ရိုးကိုထောက်မဘို့ရာထက်ပိုင်ရှင်များ၏နေ့စဉ်ဘဝဖုံးကွယ်ဖို့ပိုရည်ရွယ်သော်လည်းယခင်အလှအပနှင့်အာဏာများ၏အကြွင်းအကျန်ကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါလိမ့်မည်။
Kromberk Castle အရေအတွက် Henrik Dornberski ကတည်ဆောက်, အဲဒီနောက်မိသားစု Coronini မှရောင်းချခဲ့သည်။ သူမသည်အဆောက်အဦး Goritsky ပြတိုက်၏နေအိမ်သို့ဖြစ်လာခဲ့သည်သည့်အခါ 1954 ခုနှစ်, သည်အထိရဲတိုက်ပိုင်ဆိုင်သည်။ ရဲတိုက်ပထမကမ္ဘာစစ်အတွင်းမီးရှို့ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရအဖြစ်ပြပွဲအတွင်းပိုင်းနေရာနိုင်ဖြစ်ခြင်းခင်မှာ, ကျယ်ပြန့်ပြုပြင်ရေးကျင်းပခဲ့ကြသည်ငလျင်နှင့်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မှသည်ထိခိုက်ခဲ့ရသည်။ အားလုံးပြန်လည်အလုပ်ပြီးနောက်အသက်ရှင်သောအာကာသနှင့်အချို့သောအုပ်ချုပ်ရေးအဆောက်အဦးရဲ့အစိတ်အပိုင်းကျန်ရစ်ခဲ့သည်။
မြေညီထပ်တွင်အမှုတော်တို့ကိုအလယ်ခေတ်များ၏ဘားရို့ခေတ်စတင်ခဲ့ပြီးထားပါတယ်သည့်အနုပညာပြခန်း, ပွင့်လင်းသည်။ သူတို့တွင်ဧကရာဇ်ဖရန့်သည်ယောသပ်သည်လည်းတစ်ဦးပုံတူအဆိုပါ Exposition အဝတ်, ဓါတ်ပုံများနှင့် XIX ရာစုပရိဘောဂများပါဝင်သည်ရှိသေး၏။ အဆိုပါထူးဆန်းသောအရာတစျခုမှာ - ထိုအပ်ချုပ်စက်၏ပထမဦးဆုံးမော်ဒယ်များတဦး။ ရှေးဟောင်းသုတေသနနှင့် Ethnological ဌာနများကသိမ်းပိုက်ရဲတိုက်၏ဒုတိယအထပ်။
မသာသင့်အတွင်းပိုင်း, ဒါပေမယ့်လည်းရဲတိုက်ပတ်လည်ရှိဧရိယာစစ်ဆေးခြင်း။ ဒါဟာ Baroque စတိုင်အဖြစ် 1774 အလယ်၌ထားပတ်လည်ရှိသောစမ်းရေတွင်းထဲမှာအလှဆင်ထားသည်။ အဆိုပါရဲတိုက်ကိုမကြာခဏအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများနှင့်ယာယီပြပွဲအိမ်ရှင်အဖြစ်။
ရဲတိုက်ပတ်လည်ရှိပန်းခြံ၏အဓိကအင်္ဂါရပ်စိမ်းလန်းသောနှင့်အရောင်၏မရှိခြင်း၏ကြီးမားသောအရေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ပတ်နာရီကိုဥယျာဉ်မှူးလေယာဉ်ဆင်းသက်ဒါကြောင့်သူတို့ကသပ်သပ်ရပ်ရပ်ကြည့်ရှုပါ။ ပန်းခြံအစိမ်းရောင်အပေါငျးတို့သအရိပ်ရှိပြီးကတည်းကလမ်းတလျှောက်လမ်းလျှောက်ကြောင့်, ပျင်းမရကြဘူး။ အဆိုပါပန်းခြံတစ်ခုပွဲကြည့်စင်များနှင့်ကျောက်သွေးသမား (ထိုကျောက်ဆောင်ပေါ်ဖန်ဆင်းထားတဲ့ရှေးခေတ်အရေးအသားနမူနာ၏ Exposition) ရှိပါတယ်။
ဝန်ခံချက်လူတစ်ဦးနှုန်း2€ဖြစ်ပါတယ်။ တနင်္လာနေ့တွင်သော့ခတ်ဇန်နဝါရီလ 1st, အီစတာ, 1st နိုဝင်ဘာလနှင့် 25 ဒီဇင်ဘာလတွင်သကဲ့သို့ကောင်းစွာ, ပိတ်လိုက်သည်။ နွေရာသီမှာတော့ဧည့်သည်များ 09:00 ကနေ 18:00 ဖို့မျှော်လင့်ထားသည့်နှင့်အချိန်သည်ဆောင်းကာလ၌ကြသည် - 09:00 ထံမှ 17:00 ဖြစ်သည်။ ပြတိုက်၏အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်အတူလိုအပ်သော-ညှိနှိုင်းရန်ကြိုတင်နှင့်အတူစနေနေ့ကလည်ပတ်မှုသည်။
Kromberk Castle5ကီလိုမီတာအရှေ့၏စလိုဗေးနီးမြို့တည်ရှိသည် Nova Gorica ။ ကားဖြင့်သူ့ရဲ့အကောင်းဆုံးရရန်။
ပြတိုက် Mayer ဗန်တွင်း Bergh
တဲလင်းမြို့ - ဆွဲဆောင်မှုများ
Doutzen Kroes - အတ္ထုပ္ပတ္တိ
Erythrocyte အနည်ထိုင်နှုန်းကိုတိုးပွါး - ဘာကိုဆိုလိုသလဲ
ဖိနပ်၏စုစည်းမှု Carlo Pazolini
လူကြီး၏မျက်စိပိုဆိုးရွားလာအောင် - ကုသခြင်းထက်?
လီယိုအမျိုးသမီးတစ်ဦး - တခြားဆိုင်းဘုတ်များနှင့်အတူလိုက်ဖက်မှု
ကလေးများက Natalia Vodianova
Georgina Rodriguez တစ်ပါတ်မွေးဖွားပေးခြင်းပြီးနောက်ကိန်းဂဏန်းကပ်တိတ်ဆိတ်နေသည်
ရွှေဖရုံသီးဟင်းချို -7တောက်ပပူပြင်းတဲ့ဟင်းလျာများအရသာချက်ပြုတ်နည်းများ
ကလေးများအတွက် Enuresis - ကုသမှု
တံဆိပ်ခတ်နှင့်အတူဝမ်းနည်းလုပ်ထားတဲ့မျက်မှန်အမှုပေါင်း - ခြေလှမ်းမာစတာအတန်းအစားအားဖြင့်ခြေလှမ်း
စိန့်မာကု (ချီလီ) ၏ဘုရားရှိခိုးကျောင်း